I-Executive flat emangalisayo
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Laxmi
Ifulethi lesimanjemanje nelisha sha. Yonke ifenisha entsha nesimanje, okokuhlobisa kanye nezinsiza. Ukuhlala ngaphandle nefenisha yomoba. Gcina ijeneretha yamandla namanzi atholakala ngaso sonke isikhathi. Kuyimfihlo futhi kuthule. Ukubuka okuhle kwentaba kusuka kuvulandi. Izinketho zokudla okuphekiwe zitholakala ngokucela.
Kuyifulethi elisha sha lamagumbi okulala ama-3 elinezinto ezintsha nesimanjemanje. Ivulekile futhi inomoya. Ivikelwe kakhulu futhi iyimfihlo. Isiphephetha-moya nesiphephetha-moya sitholakala kuwo wonke amagumbi. Ihlanzekile futhi inokuthula.
Indawo yokuhlala iyi-5mins drive ukusuka enkabeni yedolobha elikhulu. Kuyimizuzu engama-30 uma ushayela usuka esikhumulweni sezindiza saseNadi. Eduze kwazo zonke izinsiza zasendaweni, isibhedlela, amamuvi njll
Umsingathi uyatholakala ngaso sonke isikhathi. Unobudlelwane nobungane. Ezinye izinsiza ezikhokhelwayo ezitholakala ngumsingathi njengokupheka ukudla, ukuhlanza ifulethi, njll